Inona no fomba tsotra indrindra hahazoana ny backlinks PR SEO ambony?
Raha jerena ny vaovao farany tao Google, maro ireo webmasters no mino fa tsy afaka mitondra any amin'ny tranonkala ny rindran-kira. Eny, ny taona 2012 dia nitondra fiovana maro tamin'ny fananganana rohy maneran-tany. Maro ireo loharanom-baovaon'ny tranonkala izay nirotsaka tamin'ny fametrahana teknolojia fananganana hosoka no namoy ny toerana misy azy ireo. Na izany aza, ny fampisehoana Penguin dia tsy natao hametrahana ny lanjan'ny backlinks ho an'ny fanatsarana ny môtô. Ny tanjona voalohany amin'ity fanavaozam-baovao ity dia ny fanovana ny fomba hahazoana jiro mifandray. Ireo izay nahavita nifanaraka tamin'ny fitsipika vaovao, dia mamorona profiles amin'ny rohy malaza amin'ny fampiasana teknolojia fananganana rohy.
Izany no antony tsy isalasalana fa mbola mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatsarana ny môtera ny fifandraisana eo amin'ny rohy. Ankoatra izany, iray amin'ireo lohahevitra manan-danja indrindra izy io ary ampahany manan-danja amin'ny tetikady ara-barotra. Mividy zavatra avy amin'ny marika izay malaza amin'ny Internet ny mpampiasa. Mba hampitomboana ny fahatsiarovanao ny marika sy ny fahefana ao amin'ny tranonkala, dia mila manorina rohy betsaka araka izay azonao atao ianao. Na izany aza, mila maka antoka ianao avy amin'ny tranonkala avo any amin'ny SEO raha ny ankamaroan'ny olona dia mino fa misy ireo mpitaona. Ny filazan'ny loharanon'ny tranonkala ankafizina ao amin'ny lohanao dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifanao.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ny paikady fampifandraisana ara-pitaovana mahomby izay hanampy anao hamorona rindranoka avo SEO amin'ny alalan'ny famoronana sy fizaràna votoaty. Araka ny zava-misy iainako manokana dia mampiseho tetikady fanorenana rohy mifototra amin'ny fitsipika mifehy ny votoatiny dia afaka mampitombo ny ampahany sosialy sy mampiakatra ny isan'ireo rindran-kira.
Fomba hahazoana rindran-kira ambony SEO
Ny orinasa an-tserasera rehetra te-hanakaiky ny mpanjifa dia mila manana fanatanjahan-tena matanjaka. Ny fiheverana ny tamberin'ny mpanjifa dia tena zava-dehibe ho an'ny orinasa an-tserasera izay te hanome fahafaham-po ny filàn'ny mpanjifa.
Ity orinasam-panorenana ity dia mora tsotra amin'ny famoronana rohy. Afaka mamorona rohy vaovao ianao amin'ny fanehoana ny fanehoan-kevitrao, ny feedback, ary ny soso-kevitrao. Tokony hahita loharanon-tranonkala manana fizarana mifantoka amin'ny feedback ianao ary mamoaka ny hevitrao ao.
Ankoatra izany, afaka mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana tranonkala famerenana an-tserasera toy ny Amazon Customer Reviews, Trustpilot, Which ?, ConsumerReports, sy ny sisa. Ireo sehatra an-tserasera ireo dia manambatra ny orinasa vonona handray fidiram-bola mpanjifa sy ireo mikasa hanome azy. Amin'ny fampiasana teknika fananganana rohy dia ahazoanao tombontsoa maro ny famerenana ny feedback anao amin'ny sehatry ny feedback na ny pejy maina.
Azonao atao ny miala amin'ny fijoroana vavolombelona roa na fehezanteny maromaro. Na izany na tsy izany, dia mila manokana, marina ary tso-po ianao. Aza miala amin'ny orinasa be loatra, satria mety ho toy ny dokam-barotra ny fijerinao. Manaova fanamiana momba ny endriky ny vokatra fa tsy tombontsoa avy amin'ny orinasa. Raha ny fandalinanao momba ny toe-javatra no manome ny mombamomba ny zava-dehibe sy manan-danja ary manolotra tombontsoa tena marina avy amin'ny vokatra na ny serivisy manokana, dia azo inoana fa ny fanehoan-kevitrao dia hivoaka amin'ny rohy mankany amin'ny sehatr'asanao mba hanamarina anao ho tena olona.
Noho izany, vokatr'izany, dia hahazo lamin'asa avo lenta ianao raha tsy mandany vola sy ezaka Source .